4 Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Vbid.vn - Vbid.vn
Bạn đang đọc: 4 Cách Nấu Bò Kho Chay Ăn Bánh Mì Thơm Ngon Hấp Dẫn | Vbid.vn in vbid.vn
Ọnwa 8 gara aga –
Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised dị nnọọ mfe, ngwa ngwa na-enweghị akwadebe ọtụtụ ihe oriri ma ọ bụ mara-esi. Ka anyị na Nguyen Kim nyochaa ugbu a esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised na-atọ ụtọ, frugal n’ụlọ na isiokwu na-esonụ!
1 Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised na anụ anaghị eri anụ sliced ​​​​mịrị
1.1 Ngwa nkwadebe
1.2 Nzọụkwụ iji sie ofe anụ anaghị eri anụ
2 Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised na ky tofu na tofu ọcha
2.1 Ngwa nkwadebe
3 Otu esi esi anụ ehi braised onye anaghị eri anụ na ọgịrịga anụ anaghị eri anụ
3.1 Ngwa nkwadebe
4 Otu esi esi ofe noodle anụ anaghị eri anụ braised na-atọ ụtọ
4.1 Ngwa nkwadebe
5 ndetu ka esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised na-atọ ụtọ
6 Ajuju na-ajụkarị mgbe ị na-esi nri anụ anaghị eri anụ braised n’ụlọ
6.1 Kedu ihe eji esi nri anụ anaghị eri anụ braised broth nwere uto dị ụtọ?
6.2 Anụ anụ anaghị eri anụ nwere ihe na-atọ ụtọ?
Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised na anụ anaghị eri anụ sliced ​​​​mịrị
Iberibe anụ anaghị eri anụ bụ ihe eji eme nri ndị anaghị eri anụ na-atọ ụtọ. Ị nwere ike ịchọta ha na ụlọ ahịa dị mfe ma tinye esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised beef sitere na anụ anaghị eri anụ pụrụ iche.
– 100 g nke anụ anaghị eri anụ
– 1 mkpọ ntụ ọka beef braised
– 1 ite nke anụ ehi braised soy ihendori
– 100 g tofu ọcha, 100 g nke tofu
– 100 g nke anụ ọkụkọ apata ụkwụ, 100 g nke mushrooms shiitake
– 200 g nke carrots
– 50 g nke peas
– 1 liter nke mmiri oyibo ọhụrụ
– 20 g coriander, 20 g lemongrass, 3 g chili ọhụrụ
Ngwa: ite, Pan na-adịghị mma, Mma,…
Nzọụkwụ iji sie ofe anụ anaghị eri anụ
Nzọụkwụ 1: Wụnye anụ anụ anaghị eri anụ maka nkeji iri na ise, wee wepụ ya ma tinye ½ ngwugwu ntụ ntụ ntụ ọka beef braised n’ime ya. N’otu oge ahụ, ị ​​na-etinye mushrooms shiitake n’ime efere, tinye 2g nke nnu ma wụsa n’ime mmiri a chara acha iji gbanye mushrooms maka nkeji iri na ise.
Nzọụkwụ 2: Ị kụcha ky tofu, tofu ọcha n’ime iberibe ma were mma mee akara n’elu ero shiitake. Maka apata ụkwụ ọkụkọ, ị na-egbutukwa akara ọnụọgụ n’elu ero ma bee ero ahụ. Ke adianade do, ị na-eweta sliced ​​​​carrots, bee okooko osisi (ọ bụrụ na-amasị gị).
Nzọụkwụ 3: Ị na-aga n’ihu ịkwadebe efere ahụ site n’ịgbakwunye 1 tablespoon mmanụ esi nri na ite, gbanye yabasị na lemongrass na chili ruo mgbe ísì ụtọ. Na-esote, ị ga-eghe anụ anụ anaghị eri anụ maka nkeji 2 wee wụsa 1 liter nke mmiri oyibo + 1 liter nke mmiri akọrọ n’ime ite ahụ.
Nzọụkwụ 4: Ị na-agbakwunye karọt na ngwugwu ½ nke fọdụrụ nke ntụ ntụ ntụ beef braised. Mgbe ahụ, tinye ½ teaspoon nnu, 3 tablespoons shuga, na 2 tablespoons nke onye anaghị eri anụ nnu. Ọ bụrụ na ịchọta na ụtọ ezughị, detụ ya ire ka ọ dabara gị ụtọ.
Nzọụkwụ 5: Tinye ero shiitake, apata ụkwụ ọkụkọ, ky tofu, peas (esiere), tofu ọcha, na cilantro n’ime ite ahụ. Gaa n’ihu na-esi nri ruo mgbe ọ na-esi ísì, tinyezie ngaji abụọ nke mmanụ ehi braised.
Nzọụkwụ 6: Esi nri maka nkeji 5 ọzọ, tinyezie 20g nke tapioca starch na 30ml mmiri iji mepụta nkwekọ maka ite anụ anụ anaghị eri anụ.
Nzọụkwụ 7: Esi nri ruo mgbe ite ahụ na-esi esi, wee gbanyụọ ọkụ, wepụ anụ anụ anaghị eri anụ n’ime efere ma nwee anụrị anụ anaghị eri anụ na-atọ ụtọ. Ị nwere ike iji achịcha nke nhọrọ gị mee ya.
Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised na ky tofu na tofu ọcha
Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised Ihe ọzọ bara uru ịnwale bụ iji ky tofu na tofu ọcha dị ka isi ihe. Usoro dị nnọọ mfe na ngwa ngwa.
– 1 iberibe tofu ọcha, 100g nke tofu dị nro
– 30 g nke mushrooms shiitake
– 30 g nke peas
– 200 g nke poteto, karọt
– 700ml mmiri oyibo ọhụrụ
– coriander, cinnamon, chives, lemongrass, mpi chili
Ngwa: Igwe anaghị agba nchara, Pan, Mma,…
Nzọụkwụ 1: Nke mbụ, ị ga-awụsa ero shiitake n’ime mmiri esi ihe dị ka nkeji iri, wee bepụ ụkwụ ya ma bee ha ọkara. Kwadebe carrots na poteto n’ime obere cubes, na tofu ọcha, bee n’ime oghere. E wezụga nke ahụ, ị ​​na-akụrisị ahịhịa lemon, bee lemongrass na ose mpi.
Nzọụkwụ 2: Ị na-egweri yabasị na lemongrass na chili, wee tinye karọt na poteto na ite ahụ. Mee ka oghe ruo nwa oge wee tinye 2 tablespoons nke ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ, 2 tablespoons nke satay. Gaa n’ihu na-esi nri na obere okpomọkụ ruo mgbe ngwakọta a na-acha uhie uhie.
Nzọụkwụ 3: Tinye na ite 700ml mmiri oyibo ọhụrụ, lemongrass na ero shiitake. Ị ga-agbakwunye ½ teaspoon nke nnu, 1 tablespoon nke MSG, 1.5 tablespoons nke shuga, 2.5 tablespoons nke anaghị eri anụ sizinin. Ke adianade do, ị nwere ike ịgbanwe ruru nke ngwa nri, sizinin nụrụ ụtọ.
Nzọụkwụ 4: Ị na-aga n’ihu na-esi na nnukwu okpomọkụ maka nkeji 5 wee tinye ky tofu, tofu ọcha, na peas. Mgbe esichara ya, wụsa starch tapioca a gwakọtara agwakọta ka ọ na-agbanwe agbanwe.
Nzọụkwụ 5: Esi nri ruo mgbe esichara ya nke ọma, gbanyụọ ọkụ, tinye coriander, cinnamon iji mepụta ísì ụtọ.
Nzọụkwụ 6: Ị na-akpụkọta anụ anaghị eri anụ n’ime nnukwu efere, tinye ntakịrị ose ma kporie ndụ na achịcha.
Otu esi esi anụ ehi braised onye anaghị eri anụ na ọgịrịga anụ anaghị eri anụ
E wezụga anụ anụ ndị anaghị eri anụ, mkpirisi ọgịrịga onye anaghị eri anụ bụkwa ihe eji esi nri anụ anaghị eri anụ na-atọ ụtọ na achịcha. Otu esi esi anụ anụ anaghị eri anụ braised A na-eme mkpịsị anụ anaghị eri anụ dịka usoro ndị a si dị:
– 150g nke anụ anaghị eri anụ ọgịrịga
– 100 g nke poteto, 1 karọt
– 15 g minced turmeric, 10g lemongrass minced, 5g minced ginger.
– 20g satay, 20g mmanụ esi nri, 12g nnu
– 34 g shuga shuga, 15 g ntụ ntụ
– 35 g ntụ ọka, margarine, 15 g
– 10 g chili mpi, 3g chili dị ize ndụ
Ngwa: Igwe ọkụ ọkụ, Ntọala ite igwe anaghị agba nchara,…
Nzọụkwụ 1: Ị na-etinye 20g mmanụ esi nri n’ime ite ahụ ma tinye ginger, satay, lemongrass, na turmeric minced na pan, wee tinye 1.2 lita mmiri akọrọ ka obụpde. N’otu oge ahụ, ị ​​na-agwakọta nnu 12g, sugar rock 34g na ntụ ofe 15g ma wụsa ngwakọta n’ime ite nke efere esi nri.
Nzọụkwụ 2: Nkwadebe mbụ nke ihe ndị fọdụrụ: sliced ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dakikpa apata ụkwụ-ọkụkọ-ọkụkọ-ọkụkọ-ọkụkụ-ọkụkụ-ọkụkụ-ụka-ọkụkụ-ọkụkụ-ọkụkụ-ọkụkụ-ọkụ-ọkụkụ-ọkụkụ-ọkụkụ-ọkụkụ-dị-ibe-iberibe,-esichaa ma bee na ọkara. Ebe ọgịrịga ndị na-eto eto bụ onye anaghị eri anụ, gbanye ha na mmiri ọkụ maka nkeji iri abụọ, wee kpochapụ ha ma bee ha n’ime obere iberibe.
Nzọụkwụ 3: Ị ghee poteto, wee tinye ha n’ime ite ofe nwere alaka ole na ole nke lemongrass (tijisịrị) ma mechie mkpuchi.
Nzọụkwụ 4: Apata ọkụkọ e ghere eghe tupu oge eruo, ọgịrịga onye anaghị eri anụ, wee bupụ ya ka ọ kpọọ nkụ. N’otu oge ahụ, ị ​​na-akwadebe iko dị ọcha ma gwakọta na 20g ketchup, 20g chili sauce, 50g nke mmiri ara ehi aki oyibo, 0.5g nke ntụ ntụ ose ise, ⅓ teaspoon nke ntụ ntụ brik shrimp. Ị na-agwakọta ya niile ma tinye ya na ite ofe iji mepụta agba bara ụba.
Nzọụkwụ 5: Mgbe ite mmiri na-esiwanye ike, wụsa mushrooms na ọgịrịga na-eto eto n’ime ite ahụ, tinye 50g mmiri na 35g nke tapioca starch. Gwakọta nke ọma ka ịmepụta tapawa.
Nzọụkwụ 6: Ka ọ dị ugbu a, ị na-aga puree 50g nke nnu granulated na 10g nke chili agụụ, 3g nke chili dị ize ndụ wee weta ya niile. Nke ahụ bụ ya, ị nwere nnukwu efere anụ anaghị eri anụ mara mma nwere nnu na ose.
Nzọụkwụ 7: Sichaa ofe ahụ maka nkeji ole na ole ọzọ wee gbanyụọ ọkụ. Ugbu a, naanị ị ga-awụnye anụ ehi braised n’ime nnukwu efere, fesa akwụkwọ koriander wee jiri achịcha mee ihe.
Otu esi esi ofe noodle anụ anaghị eri anụ braised na-atọ ụtọ
Otu esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised Ọ na-atọ ụtọ nke ukwuu na ị na-esi nri na noodles siri ike, na-edozi ahụ ma na-enye nri zuru oke maka ahụ. Ihe eji esi nri ofe noodle onye anaghị eri anụ dị ka ndị a:
– 300 g nke anụ ezi noodles
– 200 g nke ahịhịa ahịhịa
– 3 iberibe tofu
– 2 karọt, 200 g nke poteto shredded
– 500 g mgbọrọgwụ akpu, 100 g yabasị odo odo
– Kwadebekwu lemon, chili, curry, ụfọdụ akwụkwọ pandan, ahịhịa agwa, cinnamon, coriander, mmanụ cashew.
Ngwa: Infrared kichinite, ite,…
Nzọụkwụ 1: Were ite mmiri bute mgbọrọgwụ akpu na karọt n’ime ite stew maka nkeji iri atọ – 1 hour iji mee ka mmiri dị ụtọ, wee were sieve wepụ ozu karọt na mgbọrọgwụ akpu. Ka ọ dị ugbu a, ị na-ebute noodles na obụpde na mmiri esi mmiri wee kpochaa.
Nzọụkwụ 2: Beepụ ụkwụ nke mushrooms ma gbanye ha na mmiri nnu na-agbaze maka nkeji ole na ole. Wepụ ero ndị ahụ ma sachaa ha.
Nzọụkwụ 3: Weta tofu e ghere eghe ruo nchara nchara, hapụ ya ka ọ dị jụụ, wee bee n’ime obere akụkụ akụkụ anọ, ihe dịka 3cm n’obosara. N’otu oge ahụ, ị ​​​​na-asa karọt ahụ, kpoo ya ma bee ha n’ime iberibe 4. Bee n’ime obere iberibe ma ọ bụ kwachaa okooko osisi dị ka ịchọrọ. A na-egbutu yabasị na-acha uhie uhie nke ọma.
Nzọụkwụ 4: Buru ite mmanụ, chere ka o sie ya, tinyezie shallot nke amịkọrọ ọnụ wee ghee ruo mgbe ọ na-esi ísì. Mgbe ahụ, ị ​​na-agbakwunye ihe ndị dị ka olu, tofu, karọt, ntụ ntụ, pandan epupụta na ighe maka ihe dịka nkeji 10, oge na-atọ ụtọ wee gbanyụọ ọkụ.
Nzọụkwụ 5: N’ebe ugwu na stovu, ofe ahụ ekpochawo karọt na mgbọrọgwụ akpu, wee gbanye ya na ngwa nri. Mgbe ahụ, ị ​​na-agbakwunye ngwakọta nke ihe e ghere eghe na obụpde ọzọ, gbanye ya ka ọ mara ma ọ dị ugbu a rie ya. N’ikpeazụ, 2 tablespoons mmanụ cashew iji mepụta ọmarịcha agba efere anaghị eri anụ. Mgbe ite ofe na-esikwa ọzọ, gbanyụọ stovu ahụ.
Nzọụkwụ 6: Tinye noodles sie n’ime nnukwu efere wee tinye ofe. Yabụ ị mechaa ofe noodle anụ anaghị eri anụ na-ekpo ọkụ.
ndetu ka esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised na-atọ ụtọ
Iji esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised ụtọ, ụtọ, ị kwesịrị ị mara ihe ole na ole dị ka ndị a:
– Lelee ọnọdụ ihe ndị ahụ tupu esi nri, hụ na anụ anaghị eri anụ na tofu dị ọhụrụ na enweghị atụ.
– Mgbe ị na-ahọrọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, ị kwesịrị ịhọrọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
– N’oge a na-esi nri, ị ga-eme ka ọkụ ahụ dị ntakịrị ka ihe ndị ahụ dị nro ma ghara ire ọkụ. N’otu oge ahụ, a na-etinye ihe ndị siri ike na mbụ, a na-etinyekwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa.
– Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​​​kwesịrị ịṅa ntị na skim ụfụfụ n’oge usoro nri ka efere ahụ dị ọhụrụ.
N’elu bụ 4 esi esi nri anụ anaghị eri anụ braised frugal, tọrọ ụtọ kwadebere nke Nguyen Kim chọrọ ịkọrọ gị. Olileanya na ụzọ nri anọ dị n’elu ga-agbanwe echiche na nri onye anaghị eri anụ adịghị atọ ụtọ ma mara mma na nri nnu. Tinye ngwa ngwa nri a na menu onye anaghị eri anụ n’ụbọchị ọnwa zuru oke!
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a jụọ gị ajụjụ maka ngwaahịa Ezinụlọ dị ugbu a na Nguyen Kim, biko kpọtụrụ anyị ozugbo site na ọwa ndị a maka nkwado kacha ngwa ngwa:
Ekwentị oku: 1800 6800 (n’efu)
Kpaa nkata: Facebook NguyenKim (nguyenkim.com) ma ọ bụ Weebụsaịtị Nguyenkim.com
Nguyen Kim Shopping Center na mba niile
Ajuju na-ajụkarị mgbe ị na-esi nri anụ anaghị eri anụ braised n’ụlọ
Kedu ihe eji esi nri anụ anaghị eri anụ braised broth nwere uto dị ụtọ?
Ndewo enyi, ka esi nri onye anaghị eri anụ noodle ofe na-atọ ụtọ, ị kwesịrị ịkwadebe: mushrooms (dong co, agịga, apata ụkwụ ọkụkọ,…), nwere ike noodles, tofu ky,… Na mgbakwunye, tubers Kọlịflawa, karọt, pears, na apụl. bụkwa ihe na-eme ka ofe ahụ dị ụtọ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ofe ahụ na-esi ísì ụtọ, tinye ya na yabasị ọcha a ghere eghe, satay.
Anụ anụ anaghị eri anụ nwere ihe na-atọ ụtọ?
Ndewo ndị enyi, anụ anụ anaghị eri anụ na achịcha, noodles na akwa akwa ga-atọ ụtọ nke ukwuu. Otú ọ dị, mgbe ị na-eri nri na achịcha, ị kwesịrị ị na-esi nri anụ anụ anaghị eri anụ ntakịrị (tinye obere starch tapioca n’ime efere) ga-aka mma.
Xem Thêm Ngũ vị hương là gì? Ngũ vị hương gồm những gì? Ngũ vị hương làm gì ngon | Vbid.vn
Trà táo đỏ Thanh mát là món ăn thanh mát được nhiều người yêu thích trong mùa hè. Cùng theo dõi hướng dẫn cách pha trà đẹp mắt này trong bài viết tiếp theo nhé! Mục lục1 1. Công thức nấu chè sen đỏ2 2. Hướng dẫn ăn kiêng với chè táo đỏ hạt sen, […]
3+ Cách Làm Nước Ép Rau Má Mát Lạnh, Giải Nhiệt Hiệu Quả | Vbid.vn
Cách làm nước ép gotu kola Mùa đông thanh mát, bổ dưỡng là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng hiện nay. Tham khảo cách nấu rượu cần ngon tại nhà tại đây nhé! Mục lục1 1. Hướng dẫn làm nước ép gotu kola nguyên chất2 2. Cách làm nước ép gotu cola tươi3 […]
Tổng hợp 12 cách làm các món ăn chay từ đậu hũ cho ngày Lễ Phật Đản | Vbid.vn
Mục lục0.1 1. Đậu hũ kho chay0.2 2. Đậu phụ chay0.3 3. Canh đậu hũ chay0.4 4. Đậu phụ kho chay nấm0.5 5. Đậu hũ tiêu Tứ Xuyên chay0.6 6. Một người không ăn thịt rán0.7 7. Đậu hũ chiên chay0.8 8. Đậu hũ xào sả0.9 9. Nước súp đậu hũ không chay1 10. Đậu […]